Google Allo ကို Duo နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည် Androidsis
Google Allo သည် Duo နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်
ဂူးဂဲလ်ရဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်တဲ့ Allo ဟာအများပြည်သူသိအောင်မထုတ်ပြန်သေးပဲ သူ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေများလာတယ် ၎င်း၏အနည်းငယ် features တွေအကြောင်း။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုထက်အခြားဝန်ဆောင်မှုသို့ပြောင်းခြင်းကိုမနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများအကြားစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် Allo အတွက်အစီအစဉ်များစွာရှိသည်ဟုထင်ရပြီးနောင်တွင်ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်တိုးတက်လာရုံသာမကဂူဂဲလ်မှလည်းဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်လည်းပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Allo ကိုတရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်သောအခါဂူဂဲလ်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ Allo နှင့် Duo တို့၏နောက်ကွယ်မှခေါင်းဆောင် Justin Uberti က“ ဒီဟာကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနားလည်တယ်။ v1.0” ဒီအားဖြင့်သူကဒီ app ဟာ "ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာတိုးတက်လာလိမ့်မယ်"
တကယ်တော့ဂူဂဲလ်အသင်းဝင်တစ် ဦး က Uberti ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲသူ့အတွေးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက Allo မှာအသံခေါ်ဆိုမှုအင်္ဂါရပ်မရှိပါ, WhatsApp နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့လူကြိုက်များသောအဖြစ်အသုံးချဆော့ဝဲများတွင်ပါဝင်သည်, အထူးသဖြင့်၎င်း၏အဖော် application, Duo, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကလုပ်ပေးသည်အရာ, ခေါ်ဆိုကြောင်းစဉ်းစား။
Duo သည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လက်တွေ့အသုံးမပြုနိုင်သောအခြေအနေများတွင်အသံခေါ်ဆိုမှုများ၏အဆင်ပြေမှုကိုမမေ့သင့်ပါ။ 9to5Google မှလေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း Uberti ထင်မြင်ယူဆပုံရသည်။
တွစ်တာအသုံးပြုသူစီရယ်လ်လူးကပ်စ်က Duo နှင့်ပူးပေါင်းရန်သို့မဟုတ်သင့်တော်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အကြံပေးသောအခါ Uberti က“ လုံးဝ” ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။.
သေချာတာကတော့ အကယ်၍ ဂူးဂဲလ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့သဘောမပေါက်ခဲ့ရင်အရမ်းထူးဆန်းလိမ့်မယ်။ အများစုမှာဖြစ်နိုင်သည်, သူတို့သည်ဤအင်္ဂါရပ်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း, သို့သော်သူကဖြန့်ချိဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေး။.
Uberti ၏ "အတည်ပြုချက်" ကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမပြုလုပ်မီကြာမြင့်စွာမကြာနိုင်သေးဟုဆိုသည် မင်္ဂလာပါ။ ယခုသုံးစွဲသူများသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်အသစ်ကိုရွေးချယ်တော့မည်မဟုတ်ချေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google Allo သည် Duo နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်
Sticklings သည်သင် stickmens များကိုလမ်းပြပေးရမည့် Lemmings ဗီဒီယိုဂိမ်းသို့လာသည်